Olee otú Naghachi Data si ama esịn / Broken iPhone - Ị nwere ike ime ya!
1st ihe na-eme Mgbe Ị ama esịn na gbajiri Your iPhone
Ama esịn gị iPhone kpamkpam na n'ala, si ịrị ma ọ bụ na ndị ọzọ siri ike akpọkwa? Ihe ọ bụla nwere ike ime. Gị iPhone ka na a zuru okè ọnọdụ ọ bụrụ na ị kechioma. Ma ọ bụ njọ, o nwere gbawara ihuenyo. Ọbụna ndị kasị njọ, ị chọrọ ịgbanwe onye ọhụrụ. Ọ na-adabere ịgbatị nke dobe. N'agbanyeghị na ị nwe nke otu onye, ​​ihe mbụ i kwesịrị ime bụ iji nweta gị iPhone nwere ego mbụ. Ị gaghị eme ya site onwe gị ma ọ bụrụ na e nwere oké njọ mebiri. -Ewetara ya Apple ma ọ bụ ndị ọzọ ọkachamara na-echekwa na-ege ntị ihe ha ga-asị gị. Mgbe ahụ ị pụrụ ikpebi otú ịrụzi gị agbajikwa iPhone. Dị na-echeta ya. Ọ bụrụ na ị bụghị otú ọkachamara, gị iPhone nwere ike mebiri emebi n'ihu n'ihi na gị na-ezighị ezi na ime ihe.
Ihe ị chọrọ ime na Next: ndabere gị Data
Mgbe gị iPhone mkpa weghachi, echefukwala ndabere data na ya mbụ. Ozugbo ọ weghachiri eweghachi, i nwere ike mgbe-alaghachi azụ data na ya, kama ọ bụ naanị si aga iTunes ma ọ bụ iCloud ndabere ma ọ bụrụ na ị nwere otu. N'ihi ya, dị ka ogologo oge dị ka e nwere ọnọdụ dị otú ahụ na ị ka nwere ike iji iTunes / iCloud nkwado ndabere na mpaghara gị ama esịn iPhone, naanị mee ya ozugbo.
Gịnị ma ọ bụrụ na ịnweghị ike iji iTunes ma ọ bụ iCloud nkwado ndabere na mpaghara gị iPhone, ma ọ bụ na ị dị nnọọ achọghị iji ma nke ha? Mgbe ahụ, ị mkpa iji a-atọ ndị ọzọ ngwá ọrụ dị ka Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery), nke-enye gị ohere kpọmkwem iṅomi gị iPhone na-enweta data nke gị iPhone selectively. Ihe niile ị chọrọ ime bụ 3 nzọụkwụ:
Nzọụkwụ 1. Jikọọ gị iPhone kọmputa, na-agba ọsọ usoro ihe omume.
Nzọụkwụ 2. Kpọmkwem iṅomi gị iPhone site na ịpị "Malite iṅomi" na usoro si window.
Nzọụkwụ 3. Preview na nkwado ndabere ọ bụla data na gị iPhone na kọmputa.
Gịnị ma ọ bụrụ iPhone bụ kpam kpam Tiwara Etiwa?
N'ụzọ dị mwute, ndị ọkachamara teknishian na-ekwu na gị iPhone na dechara ebibi. E nweghị ụzọ iji rụkwaa ya, ma ọ bụ ka mgbidi ego bụ ezuru gị ịzụta onye ọhụrụ. Gịnị ka ị pụrụ ime ugbu a? Ị ka nwere ike họrọ iji nweta ya recycled site Apple ma ọ bụ na-ere ya ka ụfọdụ obodo idozi ụlọ ahịa n'ihi na ụfọdụ money.Then ị chọrọ iji nweta onwe gị a ọhụrụ ekwentị. N'agbanyeghị na ọ bụ ihe iPhone ọzọ ma ọ bụ ndị ọzọ na ekwentị mkpanaaka, echefula gị data na iTunes ma ọ bụ iCloud ndabere. Ị ka nwere ike inwe ha azụ.
Kedu? Ebe ọ bụ na Apple adịghị ekwe ka ị na-data nke iTunes na iCloud backups, ọbụna previu, i nwere ike iji a-atọ ndị ọzọ ngwá ọrụ iji nweta ha amịpụtara. Wondershare Dr.Fone Maka iOS (iPhone Data Recovery) dị otú ahụ a ngwá ọrụ. Dị nnọọ download ikpe mbipute n'elu nwere a na-agbalị for free ugbu a.
1st Way Naghachi iPhone data si iTunes ndabere
Nzọụkwụ 1. Họrọ nkwado ndabere na mpaghara ma wepụ ya
Ẹkedori usoro ihe omume na kọmputa gị mgbe ị na-na-na na arụnyere na ya. Mgbe ahụ na-aga "naputa site na iTunes ndabere faịlụ" n'elu nke isi window. E nwere, ị pụrụ ịhụ nile dị na iTunes ndabere faịlụ na kọmputa gị. Ị nwere ike ịhọrọ ọ bụla n'ime ha wepụ. Dị nnọọ họrọ otu na pịa na "Malite iṅomi" button. Usoro ihe omume ga-amalite ịgụ isiokwu na adịrị nkwado ndabere na mpaghara faịlụ.
Nzọụkwụ 2. Preview na-agbake ọ bụla ị chọrọ site na nkwado ndabere na mpaghara
Mgbe iṅomi akwụsị (ọ ga-abụ na a sekọnd ole na ole), ị nwere ike ugbu ịhụchalụ niile data na nkwado ndabere na mpaghara otu otu, dị ka photos, ozi, kọntaktị, ndetu, oku log, na ndị ọzọ. Mgbe Michael, ị nwere ike nne Mmetụta ihe ọ bụla ihe ị chọrọ na-enweta ha niile azụ na otu click ke akpatre.
2nd Way Naghachi iPhone data si iCloud ndabere
Nzọụkwụ 1. Download na wepụ iCloud ndabere
Ịgbanwee gaa na nhọrọ nke "naputa site na iCloud ndabere faịlụ" n'elu nke usoro ihe omume akpan window. Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike banye gị iCloud akaụntụ site na inputting Apple ID na paswọọdụ. Ozugbo ị banyere, ị pụrụ ịhụ niile ndabere faịlụ gị iCloud. Họrọ otu na ibudata ya na otu Pịa. Mgbe ahụ, i nwere ike na adịrị ya.
Nzọụkwụ 2. Preview na-agbake data gị iCloud ndabere
Nbudata na Adịrị usoro ga-ewe gị a mgbe. Chere ma zuru ike onwe gị maka oge. Ozugbo ọ na-akwụsị, ị nwere ike ihuchalu niile data gị iCloud ndabere faịlụ dị ka photos, kọntaktị, ozi, kalenda, na ndị ọzọ. Ị nwere ike naghachi ọ bụla n'ime ha dị ka ị chọrọ.